Kuteerera Hazvikwani. Yako Yemagariro Isu Inoda izvi zvina Zvinhu Zvekubudirira! | Martech Zone
Ida zvirokwazvo meseji pano kubva kuSouth Africa premium mutengesi Woolworth's. Dhijitari Mupepeti Sam Wilson anokurukura sei Vabatsiri'zvigadzirwa, Analytics uye muvaki, gonesa timu yake kutyaira mhando yekubatana uye kuendesa ine simba rezvemagariro kune vatungamiriri vekambani.
Zano raWoolworth rakapfuura zvakapusa achiteerera uye kupindura kuburikidza nevezvenhau. Pane zvimwe zvinhu zvina zvakataurwa naSam izvo zvakavabatsira kubudirira, zvese kunze uye nehutungamiriri hwavo hwemukati.
ongororo - kuwana kwecheka uye dhiza yakawanda yedata yekutarisa kuita chaiko pane yavo yemagariro midhiya yekushambadzira kudzoka pane investment.
benchmarks - kugona kuongorora vakwikwidzi vavo uye nekuona kwavo kwakanakisa uye kwakaipisisa zvemukati kuitira kuti Woolworths vakwanise kuita basa riri nani pane vavanokwikwidza.
kuita - kugona kushambadza uye kuongorora kwavo vezvenhau mushandirapamwe kuita.
Uchapupu hweRIO - inopa stats uye analytics izvo zvinobatsira kuratidza kudzoka kwekudyara kuhutungamiriri, ichipa chaiko kutengesa kwakananga kunofungidzirwa nevemagariro enhau.
Socialbaker 'Ongororo mhinduro inobatsira makambani kuyera midhiya enhau zvinobudirira, zvichibatsira kuita sarudzo dzakanangana nekuenzanisa kwehukama hwevanokwikwidza neindasitiri. Heino huru yekutsanangura vhidhiyo yavo magariro enhau analytics mhinduro:
Socialbaker 'Muvaki inobatsira kuvaka uye kutsikisa zvirimo kubva kune yakapusa dashibhodhi, kuongorora makwikwi feeds, uye kuratidza yakanakisa maitiro. Heino huru yekutsanangura vhidhiyo yavo pasocial media kutsikisa mhinduro:
Tags: ongororobenchmarkssam wilsonsocial media ongororosocial media mabhenjisocial media kukwikwidza kutsvagisasocial media reactionmagariro enhau anodzoka mukudyarapasocial media roimagariroChamhembe Afrikahairworthswoolworths yemagariro midhiya
Aug 30, 2014 pa 6: 20 AM
Great post Doug !! Ndatenda nekugovana, ruzivo rwakanyanya